UNICEF Somalia - Media centre - Maaliyad waqtigii loo baahnaa laga heley Sweden oo gacan ka geysatey wax ka qabashada shuban-biyood/daacuun aad ugu badnaa carruurta Soomaaliya ee abaartu ay halakeysey
MUQDISHO, 5 Juunyo 2017 – Hawsha naf-badbaadinta ah ee ay UNICEF ku taageereyso haweenka iyo carruurta ay la soo gudboonaatey xaaladda degdegga ah ee abaarta Soomaaliya ayaa taageero xoojin ah ka heshey Dowladda Sweden oo bixisey qaaraan ay deeqsinimo ku dheehan tahay oo ah 39 milyan oo karoon-ka Sweden ah (ilaa $4.4 milyan oo Doolarka Mareykanka ah).
Qayb ballaaran oo ka mid ah maaliyadda ayaa loo qoondeeyey waxqabadka qaybaha badan (multi-sector response) ee wax looga qabanayo Shuban-biyoodka Ba’an/Daacuunka dillaacay, oo saameeyey in ka badan 40,000 qof, oo badidoodu yihiin carruur. Maaliyadda ayaa loo adeegsan doonaa in la lagu abuuro laguna taageero xarumaha iyo unugyada daaweynta daacuunka, oo leh tas-hiilaad biyo nadiif ah iyo kuwo gacmo-dhaqasho; iyo in lagu sameeyo abaabul iyo wacyigelin bulsho si looga hortago faafidda cudurka.
“Waa qaaraan deeqsinimo ay ku dheehan tahay oo la siiyey hawsha muhiimka ah ee aan u hayno carruurta Soomaaliya,” ayaa uu yiri Steven Lauwerier, oo ah wakiilka UNICEF ee Soomaaliya. “Waxaan haysannaa fursad yar oo aan ku barbaadin karno nafta dadka oo aan ku baajin karno macaluul dhacda waxaana maaliyaddan oo la heley waqtigii ku habboonaa ay gacan innaga siineysaa in aan gaarno carruur kale oo intaa aad uga badan iyo qoysaskooda. Waxaa muhiim ahayd in deeq-bixiyeyaasha sida Sweden oo kale aaney tallaabo-qaadkooda la sugin ilaa looga dhawaaqayo in ay macaluul dillaacdey”.
UNICEF oo la shaqeyneysa la-hawlgalayaasha ayaa ballaarisey adeegyadeeda Biyaha, Fayadhowrka iyo Nadaafadda (WASH), nafaqada iyo caafimaadka ee ay ku bixiso degaannada ay abaartu saameysey iyada oo u sii marineysa kooxaha jooga xarumaha iyo kuwa warwareega. Tan iyo bilowgii sanadka, UNICEF waxaa ay daaweysey dad ka badan 35,000 qof oo qabey shuban-biyood ba’an/daacuun. Ilaa 76,000 carruur qabey nafaqo-xumada aadka u ba’an ee halista gelisa nafta ayaa la daaweeyey waxaana 1.5 milyan qof la siiyey fursad ay ku helaan biyo nadiif ah oo la cabbo.
Danjiraha Sweden, Mikael Lindvall, ayaa si baahsan ugu dhex safrey Soomaaliya oo soo arkey barnaamijyada UNICEF iyo la-hawlgalayaasheeda ay wadaan – iyaga oo biyo siinaya kumanaan qof oo soo barokacay oo daaweynayana kuwa uu haleeley daacuunka ama shuban-biyoodka ba’an.
“Anniga oo dhowr jeer u safrey degaannada ay dhibtu ka jirto oo soo arkeyna dhibaatada weyn ee haysata dad badan, gaar ahaan qoysaska Soomaaliyeed ee ay mar kale barokicisey abaarta, ayaan waxaan aad ugu faraxsanahay in aan arko maaliyadda ay Sweden bixisey oo dhab-ahaantii is-beddel soo kordhineysa,” ayaa uu yiri Danjire Lindvall. “Waxaa cad in xaaladdu ay sii ahaan doonto mid cakiran maaddaama ay xooluhu dhimanayaan oo cudurraduna faafayaan.”
Maanta, UNICEF Somalia waxaa ka dhimman 40 boqolkiiba maaliyaddii ay u baahneyd. $55 milyan oo doolar ayaa ay weli u baahan tahay UNICEF si ay muddada sanadka ka hadhey u fuliso hawlaheeda.